Madaxweyne Gaas oo Garoowe lagu Soodhaweeyey (dhegayso & sawirro) – Radio Daljir
Madaxweyne Gaas oo Garoowe lagu Soodhaweeyey (dhegayso & sawirro)
May 27, 2017 1:24 g 0
Madaxweynaha Puntland iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay. Gaas oo Madaxtooyada saxaafada kula hadlay soodhaweyn kaddib ayaa ka hadlay safaradii uu ku tagay qaarada Yurub iyo kulamadii uu la qaatay jaaliyadaha Puntland. Gaas waxaa kale oo uu ka warbixiyey xaaladda Puntland.
Warkaas waxaa inoo haya Maxamed Lakiman
War Saxaafadeedka Madaxtooyada hoos ka akhriso:
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefti balaadhan oo uu hogaaminayo ayaa maanta 27 May 2017 dalka dib ugu soo laabtay kana soo degey magaalada Garoowe ee caasimada Dawladda Puntland, halkaasi oo si diiran loogu soo dhoweeyey isaga iyo weftigiisa.
Madaxweynaha iyo weftiga balaadhan ee uu hogaaminayo ayaa waxaa garoonka diyaarada Kanooko ee magaalada Garoowe kusoo dhoweeyey Madaxweyne kuxigeenka Dawladda Puntland Eng. Cabdixakiin Xaaji Cabdulaahi Cumar Camey, gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland mudane Axmed Cali Xaashi iyo kuxigeenadiisa, Maamulka degmada Garoowe, Masuuliyiin ka tirsan goloyaasha dawladda Puntland, saraakiisha ciidamada Puntland, saraakiil ka tirsan Madaxtooyada dawladda Puntland iyo qaar kamida bulshada caasimada.
Madaxweynaha Dawladda Puntland ayaaugu horayn ummaada muslinka ah, shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada reer Puntlandba meelkastay joogaan ugu hanbalyeeyey bisha barakaysan ee Ramadaan, waxaana uu Illahay u weydiiyey ummadiisa inuu u denbi dhaafo Ramadaankana khayrkeeda waa fajiyo, waxaana uu madaxweynuhu ka hadlay muhiimada shirkii London oo looga hadlayey rimo la xidhiidha Soomaaliya.
‘’Saad la socoteenba ama aan hore u sheegay waxaan tagnay shirkii London oo laysugu yeedhay Soomaalida, waxaa ugu muhiimsanaa ee laga wadda hadlayna waxay ahaayeen nabad gelyada iyo xasiloonida dalka sidii wax looga bedeli lahaa, go’aamo waxaa jirey bishii April 17 2017 lagu qaatay Xamar oo ku saab sanaa qaab dhismeedka ciidanka qaranka iyo sidii loo helilahaa ciidan leh subad qaran oo dalka dibed iyo gudoba ka difaacikara cadawga, arrintaasi waxbaa lasyka yiri, waxabaana lasyku raacay, dabeedna shirka London waxay ahayd in laga wada hadlo qaabkii loo hirgelin lahaa dawladda Soomaliyeedna looga taageerilahaa arrintaa iyadda ah, muhiimada shirku intaas ayay ahayd wixii kale oo soo raacana waxay ahayd arrimaha dhaqaalaha iyo shaqa abuurista bulshada Soomaaliyeed’’. Ayuu yiri Madaxweynaha dawladdda Puntland.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa sheegay in shirkii London kadib ay lagama maarmaan noqotay in waxkhti lala qaato qurba joogta reer Puntland ee ku dhaqan qaaradda Europe, waxaana uu sheegay madaxweynuhu in qurba joogtu ay dalka waxbadan tarto kuno soo kordhiso, isla markaana ay xaq u leeyihiin in looga warro wacyiga dalka maanta yaala.
‘’Fursad baynoo ahayd anaga ka Puntland ahaan inaan Europe joogno oo wakhti laqaadano qurba joogtayada, muhiimada aanu u aadnayna halkaasi qayb bay ka ahayd inaanu soo arragno, waxa badan bay qurba joogtu dalka tartaa ,waana u baahan yihiin in looga waramo dalkooda, loogana waramo waxa dalka ka jira dhib iyo dheefba, horumarka socda, caqabadaha iyo dhibaatooyinka jira, in lootago oo loo waramo muhiim baynala ahayd, iyagana aanu waraysano, aaraar bay qabaan, fekeray hayaan wadanka khuseeya muhiimna way tahay inaanu uga xog warano’’ ayuu yiri Madaxweynuhu.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in ay kulamo la qaateen hay’addo caalamiya oo isugu jira kuwo u baahan maalgashi iyo kuwo daneeya arrimaha bulshada, waxaana uu sheegay inay kawada hadleen arrimo la xidhiidha shaqooyinkooda.
Madaxweyne kuxigeenka Dawladda Puntland Egn. Cabdixakiin Xaaji Cabdulaahi Cumar Camey ayaa dhankiisa kusoo dhoweyey dalka Madaxweynaha iyo weftiga uu hogaaminayey waxaana uu sheegay in dalku xasiloon yahay, isla markaana ay kajirto nabad gelyo buuxda, sidoo kale waxaa uu tacsi u diray eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen in tii ku nafweydey shaqaaqadii ay ka geysteen cadawga Puntland magaalada Boosaaso.
Dhinaca kale Madaxweynaha Dawladdda Puntland ayaa isna sidoo kale ka tacsiyey intii ku geeriyootey dhibtii ay geesteen waxma garatada liita ee cadawga Soomaaliyeed, waxaana uu u tacsiyeeyey eheladii, qarabadadii iyo ciyaalkii ay ka baxeen dadkaasi.
Ugu Danbayn, Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ugu baaqay dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanadda hoosyimaada degmada Buurtinle inay joojiyaan shidada iyo dhibaatada, isla markaana ay kawada shaqeeyaan nabada, xasiloonida iyo deris wanaaga.
Argagixiso Al-Shabaab iyo Daacish oo Puntland Xukun Dil ku Ridday (dhegayso)
Siyaasi Siciid Diiriye iyo Saamiqaybsiga Khayraadka Badda Soomaaliya (dhegayso)